Ciidaha Farxada leh Janma Gene!
Waqtiga dhejinta: 12-25-2020
2020 waxay ahayd sanad aan caadi aheyn, oo ay hareeyeen caqabado cusub iyo hubanti la'aan sare. Anshaxa, ixtiraamka dadka kale iyo wada shaqaynta ayaa sanadkan ka muhiimsan sidii hore. Iyadoo ay ka go'an tahay ballanqaadka aan caadiga ahayn ee shaqaalaha Janma Gene, waxaan sii wadnay howlaheenna oo aan kala go 'lahayn waxaana ...Akhri wax dheeraad ah »
Tijaabada Nucleic acid waxaa lagu dhammeeyaa 40 daqiiqo!
“Janma hiddo” wuxuu leeyahay laba aaladood oo u gaar ah nukliyeerka ogaanshaha aaladda nukliyeerka (madasha baaritaanka istiraatikada nukliyeerka ah, barxadda ASEA nucleic acid ee baaritaanka degdegga ah), Waxsoosaarka la soo saaray ee ku saleysan barxadani waa mid fudud, dhakhso leh, aad u gaar ah, Xasaasiyad sare iyo astaamo kale ...Akhri wax dheeraad ah »
Tuubada muunad qaadista ee la tuuro ee JanMa Gene ayaa ku jirta iib kulul!
Waqtiga dhejinta: 12-08-2020
Inta badan xalalka dhowrista fayraska caadiga ah waxaa kujira cusbada guanidine (guanidine isothiocyanate ama guanidine hydrochloride), kuwaas oo ah denaturantada caadiga ah ee unugyada lsis inta lagu gudajiro soosaarida nucleic acid, waxayna sidoo kale hawlgalin kartaa fayrasyada. Si kastaba ha noqotee, nidaamka cusbada guanidine ma c ...Akhri wax dheeraad ah »
Qalabka kumbuyuutarka ee PCR-ga (ND360) oo ay soo saartay "JanMa hidda-wade" wuxuu helay shahaadada CE!
Waqtiga dhejinta: 12-03-2020
Dhawaan, qalabka wax lagu dhejiyo ee PCR (ND360) oo ay soo saartay "JanMa hiddo-wadaha" ayaa helay shahaadada CE, taas oo calaamadeynaysa in nidaamka ogaanshaha nukliyeerka asalka ah ee hiddo-wadaha JanMa ay aqoonsadeen waddamada horumaray ee Yurub ayna heleen aqoonsi iib ah oo dibedda ah. Tan iyo markii uurku ...Akhri wax dheeraad ah »
Qingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd. alaabooyinka caafimaadka marka ugu horeysa 2020CACLP, waxyaabo badan oo tijaabo ah oo tijaabo ah oo nucleic acid ah muuqaal yaab leh!
Laga soo bilaabo Ogosto 21 ilaa 23, CACLP, oo ah Daawada Shaybaadhka Caalamiga ah ee 17-aad iyo Qalabka Dhiig-Bixinta Dhiiga iyo Carwada Reagent, ayaa si habsami leh loogu qabtay Nanchang Greenland International Expo Center. 1006 shirkadood oo ka socda silsiladaha warshadaha oo dhan ee lagu ogaanayo cudurka 'vitro' (IN vi ...Akhri wax dheeraad ah »
Ogaanshaha Nucleic acid ee coronavirus-ka cusub ee Qingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd. waxaa caddeeyay CE.
Ogaanshaha Nucleic acid ee coronavirus-ka cusub ee Qingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd. waxaa caddeeyay CE. Bishii Maarso 13-keedii, xirmada tijaabada 'nucleus acid acid' ee loo yaqaan 'COVID' (habka loo yaqaan Rapid PCR fluorescence) ee Qingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd., oo ah shirkad gebi ahaanba iska leh Qingd ...Akhri wax dheeraad ah »
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay. Canine Parvovirus (Cp), Qalabka Soo-saarista Acid Nucleic Deg-degga ah, Qalabka Soo-saarista-Bilaashka ah, Xirmooyinka Tijaabinta Shiinaha,